Masinina fanerena hafanana Combo
Ahoana ny fisafidianana ny milina fanontanianao?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-18
Inona no atao hoe milina fanaovan-gazety? Ny milina fanaovan-gazety (na "milina famindrana hafanana") dia mamindra ny lamina na ny volavola amin'ny entana toa ny T-shirt, pad pad mouse, sainam-pirenena, poketra, mugs, satroka sns sns amin'ny alàlan'ny fotoana, ny mari-pana ary ny tsindry. Ny milina fanontam-pirinty hafanana fototra dia misy ...
Fahalalana kely momba ny vokatry ny milina fanaovan-gazety sy ny fanerena isostatika mafana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-17
Ho an'ny fanerena mafana dia ampiasaina ny filan'ny tsindry sy ny mari-pana voafehy. Matetika, ny tsindry dia ampiharina aorian'ny fisian'ny hafanana sasany satria ny fampiharana ny tsindry amin'ny maripana ambany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ilay lafiny sy fitaovana. Ny mari-pana mahamaina dia degre an-jatony ...
Fampidirana ny tombony, fatiantoka ary mari-pamantarana ny asa fanaovan-gazety mafana sy ny fanaovan-gazety mafana isostatika
Inona avy ireo tombony sy fatiantoka amin'ny fomba fanafanana ny milina fanodinana? Ho fanampin'izay, inona ireo mari-pamantarana ara-teknika ankapobeny amin'ny famoahana hafanana? Ireo olana roa etsy ambony ireo no tsy maintsy takatsika, satria mifamatotra akaiky amin'ny gazety fanaovan-gazety izy ireo, ka tena zava-dehibe. Ny fanafanana ...
Adiresy:TSIA. 18 an'ny Shengda Street, Chengxi Industrial, Yiwu City. Faritanin'i Zhejiang, Sina.